MAYOR SOLTECO & MADMADOWGA MIISAANIYADA 2018, EE D/HOOSE HARGEYSA….!Q. 1aad | Haldoor News
MAYOR SOLTECO & MADMADOWGA MIISAANIYADA 2018, EE D/HOOSE HARGEYSA….!Q. 1aad
Maahmaah somaliyeed ayaa ahayd Dameertu Geela Hadidisee Qururufta Ayay Ka Dartay, Sida uu dhigayo Xeer23/2002, kalfadhiyada golayaasha deegaanku labadii bilood mar ayay qabsoomayaani, sanadkii dhamaaday ee 2017 Golaha Deegaanka Caasimada Hargeysa wuxuu fadhiistay hal kalfadhi oo kaliya, taasi waxay muujinaysaa fadhiidnimada Gudida Fulinta iyo kalsooni darada Maayorka oo ku dhiciwaayay inuu golahu fadhiisto isagoo kursigiisa u baqaya. Intii ugu mudakar sanayd Xildhibaanada golahu si cad ayay uga hor yimaadeen iyagoo ku dhaliilaya xil gudasho la,aan iyo lunsi hanti badan oo Gudida Fulintu siday doonto ugu tagrifashay.
Dhamaadkii sanadkii 2017 ayay ahayd in Golaha la horkeeno Miisaaniyada 2018, mase ay dhicin ee 25 March 2018 ayaa lagu dhawaaqay inuu furmayo kalfadhigii 13 ee Golaha. Rubuc ayaa tagay sanadkii 3 daa biloodna miisaaniyad la,aan ayaa lagu shaqaynayay, Isla maalintii uu kalfadhigu furmay qodobka 1aad ee ajandaha waxa laga dhigay ansixinta Miisaaniyada. Xildhibaanada qaarkood fajac ayay ku noqotay miisaaniyada aan laga doodin oon lasoo naaqishin oon la bislayn siday ansax ku noqonayso, 4 xildhibaan way diideen, 14 ayaa ogolaaday mayorkuna ma codayn.
Aniga waxay iigu muuqatay Miisaaniyada kootarabaan ah oo madmadow badan ku jiro oon la rabin in la furfuro ama wax layska waydiiyo, ku darsoo Golaha lama hor keenin xisaab xidhka Miisaaniyadii 2017. Sidaas darteed laba qadob ayaan doonayaa inaan iftiimiyo oo ah sababta loo diiday in Xildhibaanadu soo darsaan Miisaaniyada oo waqti la siiyo iyo sirta ka danbaysa. Ugu horayn muuqaalka Miisaaniyada 2018 markaad eegto waatii 2017 oo kale, marka laga reebo Laba Mashruuc oo miisaaniyadan ku jira oo loo qorsheeyay in dhaqaale badan oo ku dhow ilaa 5 Million lagu bixinayo, kuwaas oo kala ah:-
1. Mashruuca GIS
2. Dhisme Cusub Oo Dawlada Hoose yeelanayso.
Faahfaahinta Labadan mashruuc qormadayda danbe ayaan ku faahfaahin doonaa, anigoo dul istaagi doona sababta mashruuca UN-habitat inaga caawinaysay loogu wareejiyay shirkad private ah oo lacagtana ay cashuurta dadweynaha dusha laga saaro? Muxuu yahay Dhismaha cusub dawlada hoose ee la yidhi 5sano ayuu soconayaa, qadarka lacagta ku baxaysaa waa intee, shirkada qandaraaska la siiyay maxay tahay? Ku darsoo Mudo xileedkoodii waa gabaabsi bilo ayaa hadhay sabab danyarta culuys dhaqaale loo saaro ma muuqato.
La soco qormada danbe………!